I-Casa del Inglés-Izifihlwe, icocekile, indawo efihlakeleyo yasemaphandleni - I-Airbnb
I-Casa del Inglés-Izifihlwe, icocekile, indawo efihlakeleyo yasemaphandleni
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguRenee
-Indlu enkulu ukuya kuthi ga kwi-4 yabantu kwindawo yasemaphandleni enemibono yeentaba.
- Ukungena okuzimeleyo kunye negadi.
- 10 imizuzu yokuqhuba ukuya kwiinkonzo zasekuhlaleni.
-Indawo egqibeleleyo yokuqhawula, unqande izihlwele kwaye uphumle.
-Imizuzu engama-25 ukuqhuba ukuya elunxwemeni naseSantander.
- Ibhedi yokuhamba kunye nebhedi ephantsi iyafumaneka kubantwana kunye nabantwana abancinci
-Indawo enkulu enamagumbi okulala ama-2 xa ifuneka ukuya kuthi ga kwi-4 yabantu.
-Iibhedi zingenziwa umntu ngamnye okanye ukumkani ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho.
-Ikhitshi enefriji, i-oven, i-hob kunye nezixhobo ezisisiseko, iipleyiti njl.
-I-terrace yabucala kunye negadi ekhuselekile ngamasango.
-I-Pellet burner yokufudumeza igcina indawo ipholile ngokujonga amadangatye
-12000m yomhlaba ukuze ubhadule okanye uhambe kwaye ukonwabele ii-vistas ezimangalisayo.
-Iindwendwe zihlala kwindawo kwaye ziya kukubulisa xa ufika kodwa zikushiye ukonwabele ukuhlala kwakho ungaphazanyiswa. Siyafumaneka ukuba uyasifuna.
* Indawo yokuhlala inomgangatho omnye wendlu enkulu. Indlu yohlulwe yazisiqingatha ezibini. Ugcino olusemgangathweni oluya kuthi ga kwi-2 yabantu luya kuba negumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, ikhitshi, igumbi lokuhlala kunye nendawo yokutyela. Kubantu abangaphezu kwe-2 igumbi lokulala lesibini kunye negumbi lokuhlambela lifikelelwa ngomnyango wangaphakathi onokutshixwa. Omabini amagumbi anokufikelela ngaphandle.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Sibekwe kwiinduli phakathi kweelali zaseSolorzano kunye neBadames malunga ne-6km kulo naliphi na icala. Bobabini babonelela ngeebhanki, igrosari, iibhula kunye nenani leebhari ezincinci kunye neekhefi ezibonelela ngeraciones kunye neepinchos (ezincinci ezingatshatanga okanye ekwabelwana ngazo amashwamshwam) kunye neendawo zokutyela ezinemenyu ebonelela ngayo nantoni na ukusuka kwiibhega ukuya kwiimbotyi zemveli zasekhaya kunye nesityu sechorizo.
Kubathandi bangaphandle le ndawo ibonelela ngobuninzi bemisebenzi ukusuka kuvavanyo lwemilenze yakho yokukhwela ibhayisekile kunye nemiphunga kwezinye zeendawo eziphakamileyo zokunyuka ezixhatshazwa ngabakhweli beLa Vuelta, iindawo zokukhwela zasekhaya kunye ne-ferratas, ukukhwela inqanawa, ukusefa, ukukhwela ibhayisekile, ukugoba, ukukhwela intaba. , quad biking, SUP boarding, ukukhwela ihashe nokunye okuninzi.
Ukhenketho lomjikelo oludumileyo lwaseSpain 'iLa Vuelta' lubamba izigaba kule ndawo rhoqo ngonyaka kwaye kulo nyaka uphelileyo besidinga kuphela ukukhwela imayile ukuya kwindawo yethu yokubukela ekufutshane. Iindlela zethu azikhange zibe nomtsalane kubakhweli beebhayisikile kuphela kodwa imisitho yelizwe yokuqhuba irali isoloko ibanjwa apha ukuze kuthatyathwe ithuba leasphalt egqwethiweyo enomnqantsa we-S.
Ukuhamba nje ngemizuzu engama-20/25 kuya kukuzisa ekukhetheni iilwandle ezininzi zalapha ekhaya apho unxweme olukhulu, olucocekileyo olunesanti eqaqambileyo lujikelezwe ngamawa anamatye alungeleleneyo ukuhambahamba elwandle. Ukusefa kubonelelwa ngokubanzi ngezikolo ezithetha iilwimi ezininzi. Eyona nto imangalisayo malunga neelwandle zethu zasekhaya kukuba kukho into yakhe wonke umntu- iindawo ezixakekileyo ezinabantu abaninzi kwaye ziyaqhubeka, iindawo ezithuleyo ezishiyiweyo apho unokuhlala ungumntu okuphela kwakhe, ulwandle oluzolileyo noluzolileyo lomlambo ecaleni kolwandle. UMlambo iTreto apho abakhweli balolonga amahashe abo kwaye isikhitshane esingaqhelekanga sidlula sithe cwaka.
Imizuzu engama-20 yokuqhuba ukuya emazantsi ikuzisa eAsón apho kungekho kuphela umjikelo odumileyo onyukayo ukuya eCollados de Asón nasePuerto de La Sia kodwa kukunyuka okumnandi ukuya kwingxangxasi yaseAsón.
ISantoña, esemazantsi eNtaba iBuciero, idume ngeeAnchovies zayo kwaye iyachuma kwishishini lokuloba elibalulekileyo kunye nelokunkonkxa. ISantoña ineendawo ezininzi ezinomdla ezibandakanya iParque Natural Marismas-indawo emdaka ethandwa ngabantu ababukele iintaka kunye nabathandi bendalo kunye noFaro del Caballo (iHorse Lighthouse) apho indawo yokukhanya yenkulungwane ye-19 kufuneka ifikelelwe ngokuhla ngezinyuko zamatye ezingama-700 (hayi eyemilenze emincinci okanye ebuthathaka. intliziyo!).
Ngaba ndiyikhankanye imiqolomba? Lo mmandla unemiqolomba emininzi kunesipontshi esinemingxuma kwaye i-10 kuyo ibhengezwe njengeendawo ze-UNESCO ezililifa lehlabathi. Le miqolomba iqhayisa ngeempawu ezinje ngemizobo yomqolomba wamaxhama, iinyathi, iimammoth, iiaurochs kunye neprints yesandla kunye ne-stalagmites enomtsalane, i-stalactites kunye nokuhamba kwelava. Uninzi lufuna utyelelo olubhalwe kwangaphambili ngoko kuyacetyiswa ukuba wenze uphando lwakho kwaye ubhukishe kwi-Intanethi phambi kotyelelo lwakho.
Ukuba isixeko siyinto yakho, sihlala kwindawo ezimbini. I-Santander yimizuzu nje engama-30 yokuqhuba iWest kunye neBilbao malunga nemizuzu engama-50 ukuya eMpuma kwingingqi yeBasque. Zombini zinobutyebi bendawo, iilwandle, iimyuziyam kunye nokuthenga ngokuqinisekileyo kwaye unokuphulukana ngokulula nosuku lonke nangaphezulu kuzo zombini iindawo. Ukonwabela 'iRabas kunye neCroquetas' ngokujonga ulwandle lwase-El Sardinero e-Santander kulandela ukuhambahamba kwindawo kunye ne-zoo encinci kwi-Palace de La Magdelena yindlela yokuphumla yokuzonwabisa kwicala elithambileyo lesixeko. Ngaphandle nje kwesixeko yiParque de Naturaleza de Cabarceno, ipaki yezilwanyana zasendle ikhaya leebhere, iindlovu, iintaka ezidla inyama kunye nenkitha yezinye izilwanyana ezizulazula simahla kwindawo yendalo. IMyuziyam yoBugcisa banamhlanje kunye neZiko leBotin liya kwanelisa abathandi bezobugcisa ngelixa iMyuziyam yeMbali yangaphambili kunye ne-Archaeology ibonisa ukufunyanwa kwezinto zakudala zaseCantabria ukuya kuthi ga kwixesha lePatheolithic.
Ngeli xesha iMyuziyam yaseGuggenheim eBilbao itsala ingqalelo enkulu kuba ingaphandle kwaye iyilwe ngokukhaliphileyo njengoko ubugcisa buboniswa ngaphakathi. Kunye nengqokelela yayo yeemyuziyam ayimfutshane kukhetho lwebha kunye neeresityu kwaye ukuba awuzange ube nayo 'Kalimotxo' (i-coke kunye ne-cocktail yewayini ebomvu), le yindawo yokuyizama! Phakathi kweepaki kunye nezakhiwo kunye ne-skyscrapers unokufumana kwakhona i-neo-gothic cathedral 'Santiago de Bilbao'. Ukuba unexesha elilinganiselweyo kwesi sixeko sipholileyo, uhambo oluya kwiFunicular Artxanda luya kukusa encotsheni yeNtaba iArtxanda ukuze ube nombono omangalisayo wesixeko sonke.
Uhambo lwemini olungaphantsi kwemizuzu engama-90 ngemoto luquka iPicos de Europa, iSantillana del Mar, iComillas, iSan Vicente de La Barquera, iLierganes, iCartes, iValles de Pasiego kunye nehlathi elikhulu laseRedwood eCabezon de la Sal ukukhankanya ezimbalwa.
Uluhlu lwezinto onokuthi zenziwe apha alupheli kubantu abadala kunye nabantwana kungakhathaliseki ukuba imozulu injani. Kufuneka uzibonele ngenene.
My partner Chris and I love the outdoors. Originally from the UK we relocated to Cantabria in the last half of 2019 so that we could live life enjoying the beautiful outdoors and everything else this fantastic place and its people have to offer. We love it so much, we've worked hard to build cosy and relaxing surroundings for you to come and enjoy it too.
My partner Chris and I love the outdoors. Originally from the UK we relocated to Cantabria in the last half of 2019 so that we could live life enjoying the beautiful outdoors and e…
- Indlu, umnyango wendlu kunye negadi yentendelezo ene-terrace yahlukile kwaye izimeleyo ayisetyenziswanga ngathi okanye nabani na.
-Sikhona ukunceda iindwendwe, kungenjalo sikushiya ukonwabele ukuhlala kwakho ngaphandle kokuphazamiseka ngaphandle kokuba uyasifuna.
- Nceda ufunde ukuze ubone iinkcukacha ezithe vetshe malunga nepropathi kunye nezinto ekufuneka zenziwe kwindawo leyo.
-Sikhona ukunceda iindwendwe, kungenj…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Secadura